ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ဥက္ကဋ္ဌ ANTONIO GUTERREs နှင့် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဆောက်အအုံရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီး သူရဦးရွှေမန်းသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး H.E.Mr. Meng Jianzhu ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရိ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ဗြိတိသျှ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဥက္ကဌနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာန ၀န်ကြီး Lord Marland ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗြိတိသျှ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဥက္ကဌနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး Lord Marland ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Bob Carr ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရီဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။